Green Tea Wepụ Bulk - Zụta Mmanụ Dị Mkpa Online | AromaEasy
Ọtụtụ n’ime anyị amatala nke ọma uru akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ tii na-aba n’anya. Otú ọ dị, akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ tii dị mkpa, nke a na-etinye uche na ya, nwere ike ịnwe ọtụtụ ojiji maka ọtụtụ ebumnuche na ndụ anyị kwa ụbọchị karịa ka anyị tụrụ anya ya.
The bara uru Njirimara nke akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ tii mmanụ na-eme ka ọ bara uru maka anyị anụ ahụ na ntutu isi na-elekọta. Ọ na-ugboro ugboro-eji na aromatherapy dị ka a ọgwụgwọ mmanụ iji zuru ike nke uche mgbe ịmụcha echiche gị na-elekwasị anya.
nha Họrọ otu nhọrọ0.1 N'arọ (China) - $ 12.760.5 N'arọ (China) - $ 55.661 N'arọ (China) - $ 106.0410 Kg (China) (mgbe mbelata ego) - $ 1007.3825 Kg China) (mgbe ego kwụsịrị) - $ 2385.9 Clear
Green Tea Mkpa Oil N'ogbe E211 ibu
SKU: E211-Green Tea Categories: All Products, Nnukwu Mkpa mmanụ, Ngwa mmanụ dị mkpa, Mmanụ Dị Mkpa Dị Mkpa
akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ tii wepụ nnukwu
AromaEasy na-agba mbọ iji nweta mmanụ dị oke mkpa, nke dị ọcha, ma sie ike na nnukwu ego.
Dị ka otu n'ime mmanya na-ewu ewu na China kemgbe ọtụtụ narị afọ, a na-akọ ma na-emepụta tea n'ọtụtụ ebe na mba ahụ. Si na distillation nke na-abụghị fermented epupụta nke tii osisi, anyị Green Tea mkpa mmanụ bụ nnọọ ọgaranya polyphenols, eke ogige nwere a dịgasị iche iche nke nwere ike uru.
Nkọwa nke AromaEasy Green Tea Mmanụ
Aha sayensị: Cananga odorata
Akụkụ akụkụ: Akwụkwọ
Usoro mmịpụta: Steam distilled
Ọdịdị: Icha mmirimmiri edo edo, uzo, mobile mmiri mmiri
Ngwakọta Nke Ọma: Bergamot, Cypress, Eucalyptus, Mkpụrụ osisi grepu, Juniper Berry, lavender, Oroma nkịrịsị, Aha ya bụ Marjoram, Nutmeg, fir, Rose, Rosemary
Abamuru nke Green Tea Mkpa mmanụ
Nyere Ọgwụ Aka
Green tii mkpa mmanụ dị nnọọ irè maka ọgwụgwọ nke ihe otutu, dị ka ọ nwere ike belata mbufụt nke anụ ahụ.
Ọ bụrụ na ị nwere mmanu mmanu ma ọ bụ ihe otutu-ewekarị akpụkpọ, akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ tii mmanụ bụ n'ezie onye ị ga-atụle na-agbakwunye na nchịkọta mmanụ dị mkpa gị!
Belata mbibi UV na mgbochi ịka nká
Green tii mmanụ dị mkpa nwere antioxidants dị ike, nke na-egbochi akpụkpọ ahụ ka ọ ghara imebi site na radieshon UV na radicals free na gburugburu ebe obibi.
Polyphenols dị na mmanụ tii na-acha akwụkwọ ndụ na-ezerekwa mbibi nke collagen na elastin, na-ebelata ọdịdị nke ndọlị na ahịrị ọma.
Green tii mkpa mmanụ na-enyere weghachi ire ụtọ na-enwu ka mebiri emebi na e sijiri ntutu.
A ịhịa aka n'ahụ isi na-eji ole na ole tụlee nke akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ tii nwere ike ịkwalite uto ntutu, mgbọrọgwụ siri ike na ntutu dị mma.
Gbanyụọ Ahụ Akwara
Green tii mmanụ nwere ike inyere izuike achy na akpịrị uru ahụ ya soothing Njirimara.
Nwere ike ịgbakwunye ntakịrị tụlee na mmiri ọkụ ma ọ bụ tinye ya na akpụkpọ ahụ mgbe emechara ahụ.
Ezigbo mmanụ na ọnụahịa dị mma ị nwere ike ịchọta na AromaEasy